क्यान्सरसँग जुधीरहेकी सोनालीसहित ५ जना कलाकारमाथि अदालतमा मुद्दा ! - pnpkhabar.com
You are at:Home»हलिवुड/बलिवुड»क्यान्सरसँग जुधीरहेकी सोनालीसहित ५ जना कलाकारमाथि अदालतमा मुद्दा !
क्यान्सरसँग जुधीरहेकी सोनालीसहित ५ जना कलाकारमाथि अदालतमा मुद्दा !
By रिता घिसिंग on ३१ भाद्र २०७५, आईतवार ०८:४८ हलिवुड/बलिवुड
एजेन्सी : काला हिरणको शिकार मुद्दामा राजस्थान सरकारले ५ महिनापछि जोधपुर अदालतको पैसलालाई उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । भारतीय समाचार एजेन्सीका अनुसार राजस्थान सरकार काला हिरण शिकार मुद्दामा तब्बु, सैफ अलि खान, सोनाली बेन्द्रे, नीलम र दुष्यंतलाई रिहा गर्ने फैसलामाथि पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।
सन १०९८ मा ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्मको शूटिंगका क्रममा यी सबैका विरुद्ध २ काला हरिणको शिकार गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । २० वर्षसम्म चलेको यो मुद्दाको फैसला गएको अप्रिलमा भएको थियो ।
जसमा सलमान खानलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय भएको थियो । उनीमाथि जोधपुर अदालतले ५ सालको कैद तथा १० हजार रुपैयाँको सजाय सुनाएको थियो । तर एक दिनमै सलमान खान जमानतमा रिहा भएका थिए ।
तर, उनलाई अदालतले देश बाहिर जाँदा अनुमति लिनुपर्ने बताएको थियो । यसै कारण फिल्म ‘भारत’ शूटिंगका लागि सलमानले निवेदन दिएका थिए, जसलाई अदालतले स्वीकार गरेका थिए । यो मुद्दामा आरोपी अर्की सोनाली बेन्द्रे भने हाल गम्भीर विरामी छन् ।
उनलाई हाईग्रेड मेटास्टेटिक क्यान्सर भएको छ । उनको उपचार अमेरिकामा भइरहेको छ । सोनाली सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो स्वास्थ्यबारे जानकारी दिइरहेकी हुन्छिन् ।